Ngoziputa ulo, ihe nlere | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akụrụngwa: Ọdịdị, Ọkpụkpụ
Ị chọrọ akwukwo dị nkenke nke enyemaka chi ndị Gris?
Ị chọrọ akwukwo dị nkenke nke enyemaka chi ndị Gris? Lee anya n'ihe odide Wikipedia-chi Olympic. Chi nke Gris oge ochie Hedis onye nwe ala eze ndi nwuru anwu. Apollo bụ chi nke anwụ na-acha. Ndị Gris na-egosipụta ya dị ka nwa okorobịa mara mma. ...
Ụdị atụmatụ mmepe obodo ... Olee ụdị ha bụ?
Ofdị nhazi obodo ... Kedụ ụdị obodo ha bụ? http://forum.tr.ru/read.php?2,453003,476262 Chess layout Aro na mgbe a na-arụ ụlọ obibi oge ochie na ntinye nke ụzọ abụọ (Beijing, Kyoto), agbanyeghị na ọ bụghị naanị ndị mgbe ochie nwere ụdị a…
Chọọchị kasị ochie na Russia? Ogologo oge ole ka e wuru ya? Kedu obodo?
Ka ndị kacha ochie na Russia? Ogologo oge ole ka e wuru ya? N’ime obodo? Katidral Saint Sophia na Novgorod the Great. 1045 - 1050. Iri # 769; ezigbo ụka # 769; rykov (Churchka nke Assumption nke nwanyị nwanyị ahụ gọziri agọzi) na Kiev, nkume mbụ…
Gwa m ihe gbasara isiokwu nke 18
Gwa m ihe dị na isiokwu nke mmepụta ngwá ọrụ 18 narị afọ Willow # 769; n Willow # 769; novic Crawler # 769; na (14 March 1728, Ekaterinburg 27 May 1766, Barnaul) Onye na-eme nchọpụta Russia, nke mbụ ụgbọ ala na Russia na ...
Ozi na isiokwu "Gịnị na-amasị Gris"?
Ozi na isiokwu "Gịnị na-amasị Gris"? Moltsy Greece bụ mba nwere nnukwu akụkọ mgbe ochie gara aga na ọdịnala narị afọ gara aga. N'ala Gris ọtụtụ ihe ncheta ochie nke Hellas oge ochie, sayensị ya, nka, omenaala ya ...
kedu ihe obe a? onye maara ihe niile banyere ya pliz
Gini bu obe a? onye mara, gwa anyi banyere ya niile pliz Ankh - akara kacha dị ịrịba ama n’etiti ndị Ijipt oge ochie, makwaara dị ka "Crooks Ansata." N’obe obe abụọ a jikọrọ ọnụ…
Ego ole ka ọ ga-abụ na rosary?
Ego ole ka ọ ga-abụ na rosary? Ọ na-adabere na ihe dị gị mkpa. Chtki Buddha nwere 108, 54, 27, 21 ma ọ bụ 18 beads. Chtki Hindu nwere ihe nkesa 108, 54 ma obu 50. Na Muslim ...
Gịnị bụ okwu? ime ụlọ ịsa ahụ nke Roman ịsa ahụ ọkụ-Rome nke ebe ịsa ahụ bụ ụlọ ịsa ahụ na-eme ochie na Gris nwere nnukwu ụlọ na ebe a na-eme egwuregwu; n'oge ndị Gris, ndị bi n'obodo ahụ na-eji ha eme ihe. Na Rome ochie ...
Kedu ihe mere 8 nke ụwa?
Kedu ihe ịtụnanya 8 nke ụwa? Priora Ihe ịtụnanya nke asatọ bụ ụwa bụ obodo Petra na Jordan.wikipedia. Mkpebi nke oru ngo a bu ihe egbochiri org / wiki / Petra (wepu oghere). net / ntinye / 1215 (wepu oghere) ru.wikipedia. org / wiki / Nke asatọ_World Wonder (wepu oghere) ...
Kedu ndị bụ caryatids?
Ole ndi bu caryatids? http://ru.wikipedia.org/wiki/Karyatida KARIATI # 769; EE (Greek: kariatis “chestnut” ma ọ bụ “Kari's”), site na obodo Kariya na Laconia, ndịda Greek na nso ókèala Arcadia) bụ chi nke Artemis na-asọpụrụ na oke ohia ...
Kedu gothic? Echiche nke ụdị
Gịnị bụ gothic? CEKP ofR style ụdị Thedị Gothic (nke sitere na .tali. Gotico, lit. - Gothic, site na aha ebo nke German dị njikere), ụdị nka, nke bụ ọkwa ikpeazụ na mmepe nke nka nka nke mba ndị Western, ...
Kedu ihe bụ pilaster, mauerlat, endova?
Kedu ihe bụ pilaster, Mauerlat, endova? PILASTERS - akụkụ nwere akụkụ anọ nke mgbidi ahụ n'ụdị kọlụm agbakwunyere na ya. ENDOVA - N’oge ochie: nnukwu efere nri mepere emepe maka mmanya, biya ma ọ bụ Mash, igwe…
Kedu ihe okwu a "Baiterek" pụtara?
Kedu ihe okwu a "Baiterek" pụtara? Osisi bara ụba nke Baiterek nwere ọnọdụ ya na ihe ndị mejupụtara ya na-egosipụta ihe ngosi mmụọ nke agbụrụ ndị mgbe ochie, dị ka akụkọ mgbe ochie Osimiri flowwa na-asọ na njedebe nke ụwa. N'ikpere mmiri ya rutere ...
Kedu ihe bụ eziokwu? ...
Gini bu eziokwu?… Eziokwu di na osise Kedu onye ị na-eme Eziokwu # 769; hm, na nkà ihe ọmụma okwu nkà ihe ọmụma e ji mee ihe na-ezo aka na ntụziaka nke na-egosipụta ịdị adị nke eziokwu na-enweghị nnwere onwe na isiokwu ahụ. Eziokwu # 769; 3m uzo ...
Kedu onye na-ele?
Ọnye na-bụ Athena? Chi Greek ochie nke agha na amamihe. Athena bụ chi Greek ochie nke amamihe, patịlo nke agha, nka. Na pantheon nke Rome n'okpuru aha Minerva. Ihe ngosi E: ikwiikwii, ọta, ube na ehi. Athena bu ...
Kedu akụkọ banyere Tower nke London? Kedu akụkọ banyere Tower nke London?
Kedu akụkọ banyere Tower nke London? Kedu akụkọ banyere Tower nke London? Site na isi ụlọ Elu ahụ, e ji nlezianya lekọta ndị mkpọrọ na ụlọ ya. Ma ndị uwe ojii a họpụtara ahọpụta pụrụ iche pụtara na afọ 1485. N'oge ndị a ...
Biko depụta atụmatụ nke usoro Gothic na ije.
Biko depụta peculiarities nke usoro Gothic na ejiji. A na-egosiputa usoro Gothic na ụlọ nke ụlọ nsọ, katidral, ụka, na ebe obibi ndị mọnk. Azụlite na-adabere na Romanesque, ma ọ bụ kama Burgundian ije. N'adịghị ka romance ...
Kedu ihe ala ala pụtara ?!
Kedu ihe ala ala pụtara ?! Ma ọ bụ n'okpuru ala. Anyị na-arụ ọrụ n'elu ala ala, ọ bụ okpuru ulo))) okpuru ala ala bụ nchịkọta nke ntọala na ihe owuwu ụlọ ahụ, site na ebe a ị nwere ike ime nkwubi okwu. N'ikwu okwu siri ike, nke a bụ otu ụlọ ala, ma ...
Ònye wuru Katidral St Basil?
Ònye wuru Katidral St Basil? ụlọ nsọ St. Basil ndị gọziri agọzi (15551561) bụ ndị nna ukwu abụọ nke Postnik na Barma wuru na nke ahụ bụ otú akụkọ zuru ezu ga - adị na 1552, ndị agha nke Ivan the Terrible were capital ...
ozi banyere foto nke kivshenko, egwuregwu ndị agha nke ndị agha na-egwu egwu Petra 1 nso obodo Kozhukhovo.
ozi banyere foto nke kivshenko, egwuregwu ndị agha nke ndị agha na-egwu egwu Petra 1 nso obodo Kozhukhovo. ekele! AD Kivshenko dere na nchịkọta akụkọ agha na akụkọ ihe mere eme na n'ọhịa. Na-eji niile shades ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,352.